नेका धनुषामा तीन दशक पछि सर्वसम्मतीले जिल्ला कार्यसमिति चयन – Shirish News
नेका धनुषामा तीन दशक पछि सर्वसम्मतीले जिल्ला कार्यसमिति चयन
धनुषा, २ गते जेष्ठ
नेपाली काँग्रेस धनुषामा तीन दशक पछि यस वर्षको १३ औं जिल्ला अधिवेशनमा सर्वसम्मतिले नयाँ जिल्ला कार्य समिति चयन भएको छ ।
३० वर्ष पछि मंगलबार दिनभरिको व्यापक छलफल र मिटिङ्ग पछि अबेर साँझमा देउवा पक्षका महेश शंकर गिरि सभापतित्वमा सर्वसम्मत जिल्ला कार्य समिति चयन गरिएको छ ।
पूर्व जिल्ला सचिव समेत रहेका गिरिलार्ई नेका उपसभापति विमलेन्द्र निधिको समर्थन रहेको थियो । उपसभापति निधिले समर्थन गरेको गिरि सभापतिमा चुनिएपछि उनका प्रतिद्वन्दीको रुपमा रहेका संतोष यादव उपसभापति चयन भएका छन् । उपसभापति चयन भएका यादवलाई केन्द्रिय सदस्य रामकृष्ण यादवले समर्थन गरेका थिए ।
यस्तै डा. चन्द्रमोहन यादव र दिनेश प्रसैला पक्षबाट उम्मेदवार बनेका विशेश्वर यादवलाई सचिवमा चयन गरिएकोछ ।
कोषाध्यक्षमा राजलाल महतोलाई चयन गरिएको निर्वाचन समितिका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र बहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो ।
रावलको सक्रियतामा तीनै पक्षका नेताहरु मंगलबार बिहानदेखि छलफलमा जुटेका थिए । अधिवेशन स्थल गोपाल धर्मशालामै उपसभापति निधि, पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादव, पूर्व सभासद् डा. चन्द्रमोहन यादव लगायतको उपस्थितिमा जिल्ला कार्य समिति सर्वसम्मतले चयन भएको हो ।
मंगलबार उम्मेदवारी दर्ता गर्ने दिन तोकिएको थियो । उम्मेदवारी दर्ता भएपछि बुधबार बिहानदेखि मतदानको कार्यक्रम थियो । उपसभापति निधिले उद्घाटन गरेपछि नेकाँको १३ औ जिल्ला अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु भएको थियो ।
सोमबार नै पूर्वमन्त्री रामकृष्ण यादवले सभापतिमा संतोष यादवलाई उठाउने घोषणा गरेका थिए । डा. चन्द्रमोहन यादवले पूर्व जिल्ला सचिव विशेश्वर यादवलाई सभापतिको उम्मेदवार बनाएका थिए ।
यस अघि प्रतिबन्धित अवस्थामा काँग्रेसको लामो समय सम्म भिष्मजंग केसी (काजी साहेव)सर्वसम्मत सभापति भएर जिल्ला हाँकेका थिए ।
सन्दिप लामिछाने ‘वर्ल्ड ११’ मा समावेश, वेष्ट इण्डिजविरुद्ध मे ३१ मा खेल्ने